LUUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiiska iyo Ajaanibta - Hordhac - Qeybta 1 - Dhulka Barakaysan ee Daraasadaha Vietnam
The Luqada vietnam waa luqadda isgaarsiinta dadka Fiyatnaamiis iyo sidoo kale Afka hooyo of Dadka reer Vietnam (sidoo kale loo magacaabay Kinh, kooxda qowmiyadeed ee ugu weyn Vietnam). Samaynta luqad caadi ah oo ay dadka oo dhami adeegsadaan waa hawl adag sababta oo ah kala duwanaanshaha lahjadaha iyo dhawaaqa. Vietnamese waxay ku saleysan tahay dhawaaqyada heesta iyo codkasta oo la adkeeyay. Oggolaansho Waxay leedahay door muhiim ah oo ay ka ciyaaraan caawinta kala soocida iyo aqoonsashada macnaha ereyada. Waxaa sidoo kale jira codad fara badan oo ku jira Luqada vietnam, kuwaas oo ugu caansan uguna jecel yahay midka koonfureed. Codsigani wuxuu umuuqdaa inuu yahay nooc ka duwan midka caadiga ah maadaama ku dhawaaqistiisa ay salka ku haysaan dhawaqa weyn ee codka qayaxan ee lahjadda caadiga ah iyo xitaa naxwaha. Fiyatnaamiis waa a luqadda monosyllabic iyadoo cod kasta oo shaxan leh uu leeyahay macno gaar ah. Sidoo kale, waxay bixisaa lammaane aan la tirin karin oo ka kooban ereyo isku dhafan, kuwaas oo ka kooban 2, 3 ama xitaa dhawaaqyada hal cod oo ka kooban.
The Luqada vietnam ayaa la aasaasey oo la horumariyey qarniyo badan hadda. Dukumiintiyada noocyadii hore ee fekerka feeraha waxaa loo adeegsaday Shiinaha ilaa dhalashada dhalashada magaca [Nm] (Qoraalka Demotic) luqadda qarnigii 14aad waxaa loo adeegsan jiray labadaba hadalka iyo qoraalka, gaar ahaan soosaarista suugaanta. Qarnigii 17aad, Vietnamese ama afkii qaranku u jiray. Asal ahaan waxay si dhow ulaxiriirtaa Bortaqiisyada, Isbaanishka, Talyaani iyo Faransiiska dacaayadaha ka shaqeeya wadamada Koonfur Bari Aasiya.
Qoraalka Han Nom (Source: Baro Madasha)
Kuwaas waxay abuureen qoraal cusub oo qoraal ah oo macnaheedu yahay in lagu muujiyo Luqada vietnam. Kuwa ugu badan ee la arki karo ee ku tabarucay sameynta iyo barashada Fiyatnaamiis waqtigaas waxay ahayd vicar Faransiis ah oo la magacaabay Alexandre de Rhode1 daabicistiisa mid ka mid ah qaamuuska Vietnamese ugu horeysay iyo naxwaha loo yaqaan Vietnamese – Boortaqiisiya – Latin Qaamuuska. Markii hore, Vietnamese waxaa loo isticmaali jiray kaliya ujeedada faafinta laakiin ugu dhakhsaha badan ayaa si rasmi ah loo shaaciyey markii dadka faransiiska ay xukunkoodii gumeysiga ku soo rogeen Vietnam. Si loo kordhiyo qaar ka mid ah, Vietnamese asal ahaan waxay ahayd aaladda loogu talo galay xukunka dadka gumaystaha, laakiin markaa, iyada oo ay ugu wacan tahay ku habboonaanteeda, Vietnamese caan noqday. Intaa waxaa sii dheer, nidaamkeeda alifbeetada ee si fudud loogu dhawaaqo iyo isku darka ayaa u saamaxday inay ka adkaato dhalleeceyn kasta2, 3
Vietnamese (tiếng Việt, ama ka yar inta badan Waa hagaag) waa qaran iyo luqadda rasmiga ah ee Fiyatnaam. Waa afkii hooyo 86% dadka reer Vietnam, iyo ilaa saddex milyan oo fiyetnaam ah oo dibedda ku nool. Waxaa sidoo kale looga hadla luqad labaad qowmiyado badan oo laga tirada badan yahay ee Vietnam. Waa qayb ka mid ah Qoyska luqada Austroasiatic4, oo ay ku hadasho kuwa ugu hadal haynta badan (dhowr jeer ka weynaaday luqadaha Austroasiatic kale ee la isugu geeyay). Inbadan Erayada Vietnamese ayaa laga soo amaahday Shiinaha, oo waxaa horay loogu qori jiray iyadoo loo adeegsanayo nidaamka qorista Shiineeska, inkasta oo loo habeeyay qaab wax laga beddelay waxaana loo bixiyay ereyo afka ah. Iyada oo ah soo saaridii xukunka gumeysiga Faransiiska, luqadu waxay muujineysaa xoogaa saameyn ah oo ka timid Faransiiska, iyo Nidaamka qoraalka Vietnamese (quữc ngữ) isticmaalka maanta waa nooc loo habeeyey ee Alfabeetada luuqadda, oo ay ku jiraan xarfo dheeri ah oo loogu talagalay codadka iyo xarfaha qaarkood.
Sida luuqadda qaranka kooxda qowmiyadaha ugu badan, Vietnamese waxaa looga hadlaa Vietnam oo dhan Dadka Fiyatnaamiiska, iyo waliba qoomiyadaha laga tirada badan yahay. Waxaa sidoo kale looga hadlaa jaaliyadaha Vietnamese ee dibadaha, gaar ahaan Mareykanka, halkaas oo ay ku leeyihiin in kabadan hal milyan oo ku hadla waana luuqada todobaad ee dadka badankooda ku hadlo (waa 3aad Texas, 4aadna Arkansas iyo Louisiana, iyo Kilinka 5aad). Australia gudaheeda, waa luuqada lixaad ee inta badan lagu hadlo.
Sida laga soo xigtay Ethnologue, Vietnamese waxaa sidoo kale ku hadla dad aad u tiro badan oo ku nool Cambodia, Canada, China, Côte d'Ivoire, Czech Republic, Finland, France, Germany, Laos, Martinique, Netherlands, New Caledonia, Norway, Filibiin, Federationka Ruushka, Senegal, Taiwan, Thailand, Boqortooyada Ingiriiska, iyo Vanuatu.
"Markii hore, maadaama Fiyatnaamiis ay leedahay codad isla markaana ay ereybixin ballaaran ku wadarto Shiinaha, waxaa loo qaybiyay Sino-Tibetan”. Markii dambe, waxaa la helay in the codadka Fiyatnaamiis aad ayuu u muuqday goor dhow (André-Georges Haudricourt-1954)5 iyo ereyada-sida Shiinaha u eg ayaa sidoo kale laga soo amaahday Han Shiine intii ay taariikhdu wadaagayeen (1992); labadan dhinac wax xiriir ah kuma laheyn asalka Vietnamese. Vietnamese ka dibna waxaa lagu kala saaray subfamily Kam-Tai ee Daic wada jir ah Zhuang (oo ay ku jiraan Nùng iyo Tày oo ku yaal Waqooyiga Vietnam) iyo Thai, ka dib markii ay ka saareen saamaynta dusha sare ee Shiinaha. Si kastaba ha noqotee, the Dhinacyada Daic ayaa sidoo kale laga soo amaahday Zhuang taariikhdooda dheer ee ahaanshaha jaar (André-Georges Haudricourt), ma ahan dhinacyada asalka ah ee Fiyatnaamiis. Ugu dambeyntii, Vietnamese waxaa lagu kala saaray Austroasiatic qoyska luqadda4, ka Isniin-Khmer awood hoosaad, Vietnam-Moung laan (1992) kadib markii daraasado badan la sameeyay. Kiin waa dadka ugu badan dalka Vietnam. Sida ku xusan daraasadda 2006 Jaamacadda Fudan, waxaa iska leh Isniin-Khmer luqad ahaan, laakiin ma jiro ereygii ugu dambeeyay ee asalkiisa.
Henri Maspero6 dayactiray Luuqadda Vietnamese of Thai-Asal ahaan, iyo Aabaha Dhaarta Souvignet waxaa raad raacay Indo-Malay group. AG Haudricourt5 ayaa beeniyay aragtida Maspero6 waxayna ku soo gabagabeeyeen in Fiyatnaamiis si sax ah loogu meeleynayo qoyska Austroasiatic. Midkoodna aragtiyahaas midkoodna macnayn maayo asalka Luqada vietnam. Hal shay, si kastaba ha ahaatee, weli waa qaar: Fiyatnaamiis maahan luqad saafi ah. Waxay umuuqataa inay isku dhafan tahay dhowr luqadood, oo qadiim ah iyo casri ah, oo laga wada kulmay taariikhda oo idil kadib xiriirro isdaba joog ah oo ka dhexeeya dadka shisheeyaha ah iyo dadka reer Vietnam.
Intii ay ku hadlayeen Dadka Fiyatnaamiiska for millennia, qoran Vietnamese ma noqonin luuqadda rasmiga ah ee maamulka Vietnam illaa qarnigii 20aad. Intooda badan taariikhdeeda, qeybta hadda loo yaqaan Vietnam waxay isticmaashay qoraal Cilmiga Shiinaha. Qarnigii 13-aad, si kastaba ha noqotee, waddanku wuu hindisay Waa hagaag, nidaam nidaam qoraal ah oo loo adeegsanayo jilayaasha Shiinaha ee leh astaamaha codka si loogu habeeyo codadka la xiriira luuqada Fiyatnaamiis. Waa hagaag Waxaa la caddeeyay inuu aad uga waxtar badan yahay jilayaasha Shiinaha ee qadiimiga ah oo si ballaaran loogu adeegsaday qarniyadii 17aad iyo 18aad gabayada iyo suugaanta. Waa hagaag waxaa loo isticmaalay ujeeddooyin maamul inta lagu jiray qoraalka Hồ iyo Taariikhda 'Tây Sơn'7. Intii lagu jiray gumeystihii Faransiiska, Faransiisku wuxuu ku gacan geliyay Shiinaha Shiinaha maamulka. Maysan ahayn illaa xornimada ka timid Faransiiska in Vietnamese si rasmi ah loo isticmaalo. Waa luuqada wax lagu baro iskuulada iyo jaamacadaha waana luuqada ganacsiga rasmiga ah.
Sida dalal kale oo badan oo Aasiya ah, oo sabab u ah xiriir dhow oo ay la yeeshaan Shiinaha kumanaan sano, inta badan Vietnamese Lexon la xiriira sayniska iyo siyaasadda waxaa laga soo qaatay Shiinaha. Ugu yaraan 60% saamiga lexical-ka ayaa leh xididdo Shiinees ah, oo aan lagu darin amaahda ereyga Shiinaha ee dabiiciga ah, in kasta oo ereyo badan oo isku-dhafan ay ka kooban yihiin asal ahaan Erayada Vietnamese marka lagu daro amaahda Shiinaha. Mid ayaa had iyo jeer kala saari kara erayga u dhaxaysa Vietnamese iyo kan Shiinaha amaahda ah haddii wax laga dhimi karo ama macnihiisu is beddelayso marka codku wareejiyo. Iyada oo ay ugu wacan tahay qabsashadii Faransiiska, Fiyatnaamiis ilaa iyo hadda waxay heshay ereyo badan oo laga soo amaahday the af Faransiis, tusaale ahaan waa ph (ka yimid Faransiiska kafeega). Maalmahan, ereyo badan oo cusub ayaa lagu soo kordhinayaa qaamuuska afafka saamaynta dhaqan ee reer galbeedka oo culus awgeed; kuwan waxaa badanaa laga amaahdaa Ingiriisiga, tusaale ahaan TV (in kastoo badanaa lagu arkaa qaab qoraal ahaan tivi). Mararka qaarkooda amaahdaas ayaa ah kuwo si caadi ah loogu tarjumay Fiyatnaamiis (tusaale ahaan, softiweerka waxaa loogu yeeraa phần mềm, oo macno ahaan loola jeedo "qeyb jilicsan").8
… Sii wad qeybta 2…
1 Alexandre de Rhodes, SJ [SJ]15 March 1591 gudaha Avignon, Papal States (hadda ku sugan Faransiiska) - 5 Nofeembar 1660 magaalada Isfahan, Beershiya] wuxuu ahaa Avignonese Jesuit adeegayaashiisii ​​iyo qaamuuskii qaaliga ahaa ee saamaynta waarta ku yeeshay diinta kiristaanka ee Vietnam. Wuxuu qoray Qaamuus Annamiticum Lusitanum iyo Latinum, qaamuuskii ugu horreeyay ee saddex afle ah ee Fiyetnaam-Boortaqiis-Laatiin, oo lagu daabacay Rome, 1651.
2 Xigasho: Hay'adda Kombuyuutarada Lac Viet.
3 Xigasho: IRD Tech Tech.
4 Luuqadaha Austroasiatic-ka, sidoo kale loo yaqaan Mon – Khmer, waa qoys luuqad weyn ku leh Mainland Koonfur-bari Aasiya, oo sidoo kale ku kala firirsan qaybaha Hindiya, Bangaladesh, Nepal, iyo koonfurta Shiinaha. Waxaa jira ku dhawaad ​​117 milyan oo ku hadla luqadaha Austroasiatic. Luuqadahaas, Kaliya Vietnamese, Khmer iyo Mon ayaa leh taariikh duuban oo muddo dheer la aasaasay oo kaliya Vietnamese iyo Khmer waxay leeyihiin xaalad rasmi ah oo ah luqado qaran oo casri ah (ee Vietnam iyo Kambodiya, siday u kala horreeyaan).
5 André-Georges Haudricourt (Janaayo 17, 1911 magaalada Paris - Ogast 20, 1996 magaalada Paris) wuxuu ahaa aqoon yahan Faransiis ah oo cilmiga dhirta, cilmiga bini-aadamka iyo af yaqaan.
6 Henri Paul Gaston Maspero (15kii Diseembar 1883 magaalada Paris - 17kii Maarj 1945 xerada xayiraadda Buchenwald, Weimar Nazi Germany) wuxuu ahaa aqoonyahan Faransiis cilmiga sayniska iyo borofisar wax ku darsaday mowduucyo kala duwan oo la xiriira Bariga Aasiya. Maspero waxaa si fiican loogu yaqaanaa waxbarashadiisa horudhaca ah ee Daoism. Waxaa xidhay Naasiyiintii Dagaalkii Labaad ee Adduunka wuxuuna ku dhintay xerada uruurinta ee Buchenwald.
7 Magaca Tây Sơn (Nhà Tây Sơn 家 西山) waxaa loo adeegsadaa taariikhda Fiyatnaamiis siyaabo kala duwan iyadoo loo tixraacayo xilligii kacdoonada reer miyiga iyo boqortooyooyin baahsan oo la aasaasay intii u dhaxeysay dhammaadkii qaab dhismeedka Lê ee 1770 iyo bilowgii boqortooyadii Nguyễn ee 1802. Magaca hoggaamiyaasha mucaaradka degmada, Tây Sơn, ayaa loo yimid in lagu dabaqo hoggaamiyeyaasha naftooda (Walaalaha T'y Sơn: ie, Nguyễn Nhạc, Huệ, and Lữ), kacdoonkoodii (kacdoonkii T'y Sơn) ama xukunkooda (the [Nguyễn] TYy Sơn dynasty).
8 Xigasho: Wikipedia Encyclopedia.
Image Sawirka madaxa - Xigasho: vi.wikipedia.org
(Booqday jeer 2,569, booqashooyinka 13 maanta)
Views Views: 2,816
← Dhalashada Fiyatnaam - Isbarasho - Qaybta 1aad
LUUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiiska iyo Ajaanibta - Qeybta 2 →
Booqashada Maanta: 339
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,260
Guud ahaan Wadarta: 286,155